Kedu ihe bụ Ngwa-Akụkụ Ngwaọrụ (DSP)? | Martech Zone
Ọ bụ ezie na enwere netwọkụ mgbasa ozi ole na ole ebe ndị mgbasa ozi nwere ike ịzụta mkpọsa ma jikwaa mkpọsa ha, nyiwe-akụkụ nyiwe (DSP) - mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya ịzụta-akụkụ nyiwe - nwere ọtụtụ ọkaibe ma nye ọtụtụ ngwaọrụ dịgasị iche iche iji dobe, debe ọnụ ahịa oge, egwu, nyocha, ma bulie mgbasa ozi ha. Nchọpụta ndị nwere akụkụ na-enyere ndị mgbasa ozi aka iru ọtụtụ ijeri echiche na ngwa ahịa mgbasa ozi nke a na-enweghị ike ịghọta na nyiwe dị ka ọchụchọ ma ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ewezuga ịbawanye oke, DSPs na-emekwa ka onye mgbasa ozi nwee ike iweghachi nkwụghachi mgbasa ozi ha na ntinye ego site na iche iche, ịchụ ego oge na njikarịcha mgbasa ozi.
Kedu ihe bụ DSP?
Nchọpụta a na-achọ n'akụkụ (DSP) bụ ikpo okwu nke na-enye ndị na-azụ ahịa ngwa ahịa mgbasa ozi dijitalụ aka ijikwa ọtụtụ mgbanwe mgbasa ozi na akaụntụ mgbanwe data site na otu interface. Ebumnuche nke sistemụ ndị a bụ ịhapụ ndị mgbasa ozi ka ha rụọ ọrụ mgbasa ozi ha ma bulie ọnụ ahịa ha bara uru na Pịa (eCPC) na ezigbo Cost per Action (eCPA).
Nke a bụ atụmatụ siri ike nke usoro sitere na Sitescout - site na onye mgbasa ozi na ndị na-ege ntị:
Kedu ihe bụ eCPA? eCPC?
Efu nke Omume zuru oke (eCPA) bụ mmụba nke ịdị irè nke ngwongwo mgbasa ozi nke onye mgbasa ozi zụrụ site na ụgwọ ọhụụ, ma ọ bụ ụgwọ maka otu puku (CPM). Ọ bụrụ na mmụba ahụ bụ pịa n'ezie, enwere ike ịkpọ ya dị ka ọnụ ahịa bara uru kwa Pịa (eCPC)
Omume nwere ike soro site kuki nsuso, pịa-nsuso, ọdịda peeji nke akakabarede-nsuso, ekwentị oku na-aga nsuso, ma ọ bụ nkwado koodu mgbapụta.
Ndepụta Ndị Na-eduzi DSP
Adobe Media Optimizer - usoro mmemme ịzụrụ ihe nke na-enyere gị aka ịkọ amụma kachasị mma maka ọchụchọ, ngosi, na mgbasa ozi mmekọrịta dabere na mmefu ego gị. Ọ na-akpaghị aka mmezu nke atụmatụ mgbasa ozi gị ma nyere gị aka ịchọta ụzọ kachasị mma iji nyefee ndị na-ege gị ntị bara uru dị mkpa. TubeMogul bụkwa akụkụ nke Adobe ugbu a.
AppNexus - AppNexus Console na-agwakọta modularity na nnukwu ike programmable ngwaọrụ nke na-enyere ndị na-azụ ahịa aka ịghọta ngwangwa oge-na-uru na ọdịiche dị iche ..
Ndị na-ege ntị - AudienceScience bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi SaaS zuru ụwa ọnụ, na-eweta ịdị mfe na ịza ajụjụ nye ndị mgbasa ozi n'ụwa niile.
DataXu - DataXu bụ nnwere onwe, data 100% jikọtara ọnụ na nchịkọta ụlọ ọrụ teknụzụ.
Onye njikwa ọnụ ahịa DoubleClick - Jikwaa ọnụ ahịa gị ma jikọọ na ndị na-ege gị ntị na ngwaọrụ ọ bụla site na usoro ịzụ ihe mmemme zuru ezu.
Fiksu - Fiksu DSP nwere data na teknụzụ iji mee ka mkpọsa mkpanaka gị na-arụ ọrụ nke ọma
Mgbasa ozi - Teknụzụ na ọrụ anyị na-enyere ndị ahịa aka iru ndị na-ege ha ntị na ọnụ ọgụgụ ha chọrọ iji nweta nsonaazụ ha chọrọ.
Otu site AOL - AOL Platform na enyere ndi ahia ahia nke elu uwa aka na ndi ahia ka iru ndi ahia n’elu desktọọpụ, mobile na TV sitena ahụmịhe dị elu, nzụta mmemme na mkpọsa ihe ngosi.
Simpli.fi - Ngosipụta, ekwentị mkpanaaka, vidiyo na mmekọrịta mmadụ na ibe ya wuru Maka mkpọsa mmemme programmụ.
SiteScout - SiteScout nke Centro bụ ụzọ isi na-achọ ọdịmma onwe ya (DSP) maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ na-azụ ahịa, na-eme ka ngosi ngosi ngosi, mkpọsa mkpanaka, mkpọsa vidiyo, na mkpọsa iweghachite.
Onyinyechukwu - Usoro ikpo okwu kachasị ike n’ụwa maka ikesa ọdịnaya. Mee ka ọdịnaya dịkwuo elu site na itinye mgbasa ozi ala.
Tapad - Tapad bu ezigbo onye ahia ahia. Ma ebumnuche bụ ịkọba ozi gị, tinye ndị na-ege gị ntị ma ọ bụ gbanwee data n'ime dollar, anyị na-eme ya. Anyị na-ejikọ data n'ofe ngwaọrụ niile iji ghọta ọdịmma, agụụ na omume nke ndị na-ege ntị kachasị mkpa.
The Trade Trade - The Trade Desk bụ a Buy-n'akụkụ ikpo okwu na-enye ohere niile RTB Ndepụta Ngwaahịa maka ngosi, telivishọn, video, na-elekọta mmadụ, mobile, na ndị ọzọ. Ndị na-azụ ahịa mgbasa ozi na-eji ngwaahịa anyị nwere ike ịme mkpọsa na ọwa mgbasa ozi n'ịntanetị ọ bụla ma kọọ banyere otu ọwa ọ bụla na-ejikọ iji metụta ndị ahịa ha.
Turn - Were iwu nke mpịakọta data dị na gị iji mata, ghọta, ma chọta ndị na-ege gị mkpa iji ruo mkpọsa gị. Mepụta ngalaba dabere na ezigbo njirimara onye ọrụ, jiri ngwaọrụ ntụgharị iji gbatịa iru gị, wee ziga data gị ozugbo na nyiwe ahịa gị.
Tags: acronymadobe media optimizerngwaihe nkiriịzụta-n'akụkụ ikpo okwuDataXuina akụkụ ikpo okwuokpukpu abụọ pịa njikwa njikwaNkejiekpaecccirè Cost kwa Actionirè Cost kwa PịaechicheMgbasa oziotu by aolmgbasa ozi mmemmeezigbo oge biddingdị mfeSaịtịNdokwamgbatatebụl ahiatubemoguln'akaihe a Buy-n'akụkụ ikpo okwuihe bụ ina-n'akụkụ ikpo okwuKedu ihe bụ dspKedu ihe bụ ezigbo oge bidding